PetrPikora.com - Buuraha waaweyn, Buuraha Jizera, Jannada Bohemian
Dukumiinti sawiro taariikhi ah oo joogto ah oo ku saabsan horumarka Krkonoše, Jizera iyo Bohemian Jannada waqtiga loogu talagalay
Kusoo Biir Boggan
Khariidadda Snezka 3D
Sněžka (Polish Śnieżka, Schneekoppe Jarmal) ayaa dhererkeedu yahay 1603,3 m oo ka sarreysa heerka badda (buurta hore ee 1602 m ka sarreysa heerka badda) buurta ugu sarreysa buuraha Giant, Sudetenland, Silesia, Bohemia, iyo Jamhuuriyadda Czech oo dhan. Sababta oo ah xaqiiqda ah in ugu sarreysa ee Sněžka ay ku taal Poland (qiyaastii 10 cm ka sarreysa), ugu sarreysa ee ku taal Czech Republic waa Luční hora.
Waa qayb muhiim ah oo ka mid ah qaybta bari ee Buuraha Giant. Xuduudda Czech-Polish ayaa ka gudubtay shirkii Sněžka, halka ugu sarreysa ee dhinaca Booland ee xadka, dhowr mitir galbeed ee Chapel ee Sts. Lawrence. Laga soo bilaabo 4,5 km fog ee Pec pod Sněžkou cable aad u sareeya. Woqooyiga, dhinaca Booland waxay ku dhuftaa dooxada webiga Lomnička, dhinaca galbeedna waxaa loo yaqaan 'Úpské peat', qaybta koonfur-galbeed ee loo yaqaan 'Obří důl, koonfur-bari ilaa dooxada Jelení brook iyo qaybta bariga ee Giant Ridge.
Buurta dusheeda waa dhagax weyn oo leh qiyaastii 120 m000. Maaddaama Sněžka ay tahay buurta ugu sarreysa aag ballaadhan, waxaa korka ka muuqda aragti ballaaran oo panoramic ah. Meelaha ugu sarreysa waxay u adeegtaa sidii dalxiis oo soo noqnoqda oo si loo gaaro waxaa suurtagal ah in la isticmaalo dhowr waddo oo dalxiis…
Buuraha Giant, Buuraha Jizera, Jannada Bohemian
Martida qaaliga ah ee server-ka 'PetrPikora.com', boggaga loogu talagalay Buuraha Giant, Buuraha Jizera iyo Jannada Bohemian ayaa hadda laga heli karaa bogga cusub ee Czech PetrPikora.cz, mahadsanid. Waqti xaddidan, dhejisyo duug ah ayaa laga heli doonaa labada domain isla waqti isku mid ah.
Mid ka mid ah aragtiyaha badan ee ku saabsan wareegga weyn ee Prachovské skaly waa Hakenova vyhlídka. Waxaa loogu magac daray si sharaf leh Professor Haken oo ka soo jeeda Horní Lochov, kaasoo cilmi baaris ku sameeyay dhagxaanta. Hakenova vyhlídka wuxuu ku yaal bartamaha Prachovské skal oo wareeg ah (mid cagaaran). Sababo la xiriira geedaha qaan gaarka ah ee ku xeeran, waxaa jira aragti kooban oo xagga aragtida ah, laakiin wali waxaa jira aragti Krkavčí skály iyo Tábor. Wakhtiga ugu habboon ee lagu booqan karo rajadaas waa xilliga xilliga gu'ga.
Křížkovského vyhlídka (sidoo kale heesaha Vyhlídka Křížkovský, oo asal ahaan ka soo jeeda Koowaad) waxay ku taal Prachovské skaly waana aragtida koowaad ee calaamada dalxiiska cas ee Prachov, halkaas oo laga galo albaabka dhagaxyada. Waxaa la magacaabay ka dib booqasho uu ku tagay Prague Křížkovský Choir bishii Maarso 16, 1930. Muuqaalka waxaa jira muuqaalka aagga bari (Kumburk iyo Bradlec), waqooyiga (Tábor, Morcinov, Kozlov, Kozákov iyo Jinolické balliyada) iyo galbeedka (waqooyi-galbeed) ee Prachovské skaly ( Burburinta, Ještěd, Vyskeř, Hruboskalsko iyo gadaasha Krkonoše).
Waardiyaha waxaa sidoo kale loo yaqaannaa "Lookout of the Křížkovský Choir", iyada oo lagu xasuusto safarka xubnaheeda ay ku tagayaan Prachovské skal Maarso 16.3.1930, XNUMX.
Rajada Calaamadaha Nabadda
Vyhlídka Míru waxay ku taalaa qaybta dhexe ee magaalada dhagaxa ee Prachov ee dhagxaanta ku taal Císařská chodba waxayna na siisaa figrad fiican oo ku saabsan aagga weyn ee dhagaxa weyn ee Prachovské skal iyo dariiqa xagga galbeed. Marka laga eego aragtida waxa suurtagal ah in la arko tiro badan oo munaarado dhaadheer iyo badiyaa aragtida loo qaado fuulitaanka mid ka mid ah. Ka soo horjeedka dooxada waxaa suurtagal ah in la arko aragtida Pechova iyo Šlikov. Xagga hore waxaan arki karnaa silhouette astaamaha Bohemian Paradise qalcaddii Trosky ama tii ugu sarreysey ee Vysker. Safar ballaadhan oo yar oo gaaban ayaa na noo horseedi doona.
Marka laga eego aragtida Nabadda waxaa jira aragti wanaagsan oo ku saabsan dhagaxyada ku wareegsan, irbadda Prachovská, Madonna iyo Plecháč. Sidoo kale waxaa la arkaa Trosky, Vyskeř iyo Mužský.
Hlaholská vyhlídka - barta ugu sarreysa ee loo yaqaan 'Prachovské skal'. Waa aragtida labaad laga soo galo albaabka dhagaxyada Branka. Magaceeda ayaa laga soo qaatay booqasho ku timid Prague Hlahol Choir, oo xubnahoodu booqdeen dhagaxa 1887. Laga soo bilaabo Hlaholská vyhlídka waxaa jira muuqaalka kooxda 'Krkavčí skal group', Přivýšina, Jinonické balliyo iyo buuraha Tábor, Bradlec iyo buuraha Kumburk. Muuqaalka waxaa lagu marin karaa calaamad calaamadda dalxiiska cagaaran.
Muuqaalka ugu sarreeya ee Prachovské Rocks (460 m). Waxaa la magacaabay ka dib markii kooxdii heesaha Hlahol ee Prague, oo booqday Pachovské skály sanadkii 1887. Muuqaalka ayaa bixiya aragti bari iyo waqooyi-bari.
Hruboskalské dhagaxa magaalada sidoo kale waa goob dalxiis oo muhiim ah. Astaamaha caanka ah ee caanka ah waxaa ka mid ah 'chateau Hrubá skála', oo lagu dhisay dhagax weyn oo dhagax weyn qarnigii 14aad…
Meesha ku dhawaad ​​90 KM waqooyi-bari ka xigta Prague waxaa qiyaas ahaan xadka u leh magaalooyin: Sobotka, Mnichovo Hradiště, Sychrov, Frýdštejn, Železný Brod, Semily, Lomnice nad Popelkou, Železnice iyo Jičín. Turnov waxaa dhaqan ahaan loo arkaa "wadnaha Jannada Bohemian". Astaamaha ugu muhiimsan ee gobolka waa buurta Kozákov iyo burburka qalcaddii Trosky. Magaalooyinka Rock sidoo kale waa muhiim, gaar ahaan Prachovské skály, Příhrazské skály, Hruboskalsko iyo balliyada, sida Žabakor, Komárovský rybník iyo balliyada balliyada Podtrosecké iyo Podkostecké…
Aqoonsiga St. George ee Drake
Dhismaha sanduuqa dhagaxa ee St. George wuxuu ka yimid 1806, laga yaabo in uu yahay Jan Chládek Jr ..
1884, František Jiroš iyo xaaskiisa Petronila waxay qabteen baal cusub oo ay sameeyeen Josef Zeman ee Tatobit. Gawaarida waxaa lagu qurxiyey hal dhinac oo dhinac walba ah: Masiixa oo ku yaal Garden of Gethsemane, lamaanaha Saints Petronila iyo Fellicula, Mary Magdalene iyo Saint Anna.
Nuqul waxaa soo diyaariyey Jiří Novák hadda. Taallada asalka ah waxay ku taalaa hudheelka matxafka Bohemian Paradise ee Turnov.
Dhagxaanta Rock oo u dhow beerta Kopic
Dhagaxyada ka hooseeya beerta Kopic, Jirošová rychta, milkiilaha xilligaas iyo farshaxanka caanka ah Vojtěch Kopic wuxuu abuuray aag muuqaallo dhagax-weyn ah, badiyaa taariikhdii Czech. Shaqadiisu waxay socotay ku dhawaad ​​40 sano (1940 ilaa 1978) waqtigaas oo in kabadan 30 kaalmo oo tirooyin ah, xayawaan ama wejiyada dhismayaasha ayaa la sameeyay, oo badanaa lagu kordhiyay xigashooyinka ama farriimaha.
Vojtěch Kopic (1909-1978) wuxuu guursaday dhismaha 1932-kii ilaa intii uu ku dhintey dooxada dhexdeeda hoostiisa wuxuu xardhay dhowr meelood oo dhagaxyo ah, mowduucyada uu inta badan ka soo qaatay taariikhda Czech. Ilaalinta taallada ee shaqooyinkaan waxaa la shaaciyay laga bilaabo 25 Noofembar 2017 qaab qaab aag ilaalin ah oo taallada dhaqanka ee Kopicův statek.
Wadad la calaamadeeyay ayaa kugu geyn doonta xaraashka, leexinta ayaa lagu calaamadeeyay calaamadaha dalxiisyada.
Kopicův statek (horey loo oran jiray Jirošova rychta) waa taariikh guryeeysan oo dhamaatay dhamaadkii qarnigii 18aad, waa taallo dhaqameed. Tani waa (oo ay weheliso, tusaale ahaan, beerta Dlask) mid ka mid ah tusaalooyinka ugu xiisaha badan ee ku saabsan dhismaha farshaxanka ee nooca Pojizerský. Beer (Kacan…
keydka macluumaadka goobta
EMBA spol. s Garacad
Isku laabma @ guriga
looxyo faashad leh
baabuur taariikhi ah
xiriir gudaha ah
Mudada lagu dhex jiro
sida barnaamij loo sameeyo
sida loo sameeyo xijaab
sida loo abuuro
jir qurux badan
sawir qalin leh
sawir sawir gacmeed
toogasho hawada ah
xiriirinta isku xirka
meelaha lagu ciyaaro barafka
Waxaan qabaa coronavirus
Xiddig buluug ah
dabeecadda dabiiciga ah
Ma haysto coronavirus
soo dir bogag
geed linden xusuus mudan
geedka xusuusta leh
warqad warqad ah
meesha baabuurta la dhigto
daboolka dhulka hoostiisa
sale of baakado
sale of warqad
jawaab celin ah
munaaraddii waardiyaha Štěpánka
miisaan dhakhso lumiso
magaalada dhagax weyn
baabuur duug ah
goobta soo gudbinta
buugga macluumaadka url
barnaamij muuqaal ah
wax soo saarka ee baakado
wax soo saarka warqad
High kor ku Jizerou
Muuji inbadan Muuji wax kayar
Ma jeceshahay mashruucan?
Ku tabaruca horumarka sii socda, mahadsanid.
PetrPikora.com | Caddaani | Tusaalooyin | ku saabsan EMBA.cz | Emba.cz | Archivbox.cz | Mashiinnada | Khariidadaha Google | Portfolio
Waxaa xoojiyay tikniyoolajiyadda Blogger